Izifundo Ezi-3 Abathengisi Bokuqukethwe Kufanele Bafunde Kokudayisa | Martech Zone
Izifundo Ezi-3 Abathengisi Bokuqukethwe Kufanele Bafunde Kokuthengisa
NgoMgqibelo, Septhemba 19, 2015 NgeSonto, Septhemba 20, 2015 Douglas Karr
U-Erin Sparks ugijimisa i-Edge yomsakazo weWebhu, i- i-podcast siyayixhasa futhi sibamba iqhaza kuyo njalo ngesonto. Mina no-Erin sibe ngabangane abahle eminyakeni edlule futhi saba nengxoxo emangalisayo kuleli sonto. Bengikhuluma nge-ebook ezayo engiyibhalele yona I-Meltwater lokho kuzoshicilelwa kungekudala. Ku-ebook, ngingena emininingwaneni enkulu mayelana nenselelo yokwakha isu lokumaketha lokuqukethwe nokukala imiphumela yalo.
Omunye umqondo ozungeza ekhanda lami uthi ngokoqobo ukwakha iqoqo lokufa, idayisi ngalinye libe yi- isici esihlukile sisetshenziswe esihlokweni esithile. Gingqa idayisi bese unquma i-angle obhala kuyo okuqukethwe… mhlawumbe i-infographic enamaqiniso, umlando wezindaba, nokubizelwa esenzweni. Noma i-podcast enethonya elenza izifundo ezithile ezihlukile zokulingiswa. Noma mhlawumbe isibali esisebenzisanayo esizeni esisiza ukunquma imbuyiselo yotshalo-mali.
Ucezu ngalunye lokuqukethwe lungaba ngesihloko esifanayo, kepha ungacabanga ukuthi - ngobuhlakani - ucezu ngalunye nalo luhlukile futhi luthatha inhloso yezithameli ezithile. I-Rolling dice, vele, akuyona indlela ehlakaniphile yokubikezela nokukhiqiza okuqukethwe okunenjongo okukhiqiza imiphumela yebhizinisi edingekayo. Okungiletha ekuthengiseni.
Indodakazi yami, UKait Karr, wasebenza esitolo sobuhle iminyaka embalwa. Wawujabulela lo msebenzi, futhi wawumfundisa ithoni mayelana nokuthengisa nokuthi bengicabanga kanjani amasu wokuqukethwe eminyakeni edlule. Njengomphathi owamukelayo, indodakazi yami ibiphethe wonke umkhiqizo ongena esitolo, ibiphethe uhlu lwezinto ezisetshenziswayo, futhi iphethe ukukhangiswa kokukhangisa esitolo sonke.
Izifundo Zokuthengisa Zabathengisi Bokuqukethwe
Yokusungula - Njengoba izivakashi zesitolo zikhungatheka lapho isitolo singenawo umkhiqizo owufunayo, ulahlekelwa amakhasimende ngoba awunakho okuqukethwe kusayithi lakho okufunwa ngamathemba. Asijwayele ukubheka isu lokumaketha lokuqukethwe njengokuthatha uhlu lwempahla ngoba abathengisi bavamise ukuthola lapho behamba. Kungani kunjalo? Kungani abathengisi bokuqukethwe bangenzi uhlu oluncane lokuqukethwe? Esikhundleni sokubuza ukuthi mangaki amaposi ebhulogi ngesonto okufanele izinkampani zishicilele, kungani abathengisi bokuqukethwe bengenzi okulindelwe kwe ukuphathwa okuphelele kokuqukethwe kuyadingeka?
Ukuhlolwa kwamabhuku - Esikhundleni sokwenza amakhalenda wokuqukethwe aphakamisa izihloko ezijwayelekile ezizobhalwa ngenyanga ezayo, kungani thina, esikhundleni salokho, singenzi ukuhlaziywa kwegebe phakathi kwempahla edingekayo nokuqukethwe esivele sishicilelwe? Lokhu kuzoqinisekisa ukuphindwaphindwa okuncane futhi kusize ukukhipha okuqukethwe. Ngokufana nokwakha indlu, uhlaka lungakhiwa kuqala, bese kuba ama-sub-system, futhi ekugcineni kube imihlobiso!
Amaphromoshini - Ngenkathi isitolo sinethani lemikhiqizo, isitolo sikhetha ukugxila ekukhuthazeni kwabo imikhiqizo enenzuzo enkulu noma emisha inyanga ngayinye. Abasebenzi bafundisiwe, imikhankaso iyakhiwa, kukhonjiswa ngemikhiqizo, futhi iqhinga le-omni-channel lokukhuthaza okuqukethwe lenziwa ukukhulisa inzuzo nemiphumela. Ngokuhamba kwesikhathi, njengoba imikhiqizo nokunikezwa kuzungeziswa, isitolo sihlelela imiyalezo kanye nokuphromotha ukuqhubeka nokukhulisa imiphumela yebhizinisi.
Ngalesi sizathu, sidinga ukuhlukanisa okubhaliwe kokumaketha kokuqukethwe. Umuntu onethalente elimangalisayo lokukopisha nelokuhlela akusho ukuthi banokuqonda okudingekile ekubhaleni, ekucwaningeni amabhuku, nasekuthuthukiseni ukukhushulwa kwebhizinisi lakho. Le infographic evela ku-Uberflip ihamba kuzo zonke izimfanelo zabathengisi bokuqukethwe abaphumelelayo.
Inothi eliphansi: Ngizokugcina uthumele kufi naku-ebook!
Tags: ukuhlolwa kokuqukethweyokusungula okuqukethweumaketha wokuqukethwei-infographic marketer yokuqukethweizimfanelo zokumaketha kokuqukethweukukhushulwa kokuqukethweqasha umthengisi wokuqukethwetekutsengisauberflip
Izindlela Ezi-13 Zokukhomba Ukukhangisa Kwakho Kokubonisa
Ukwenza ngezifiso akukona okuzenzakalelayo